केपीलाई ठूलो धक्का : संसद बाट निष्कासन गर्न बाबुरामले सुरु गरे हस्ताक्षर संकलन अभियान – Points Nepal
केपीलाई ठूलो धक्का : संसद बाट निष्कासन गर्न बाबुरामले सुरु गरे हस्ताक्षर संकलन अभियान
प्रकाशित मिति: मंगलबार, मंसिर २१, २०७८ समय: ९:३६:४३
सत्ता साझेदार दल जनता समाजवादी पार्टी संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई संसदबाट निष्काशन गरेर भएपनि संसद बैठक अगाडि बढाउनु पर्ने अभिव्यक्ति दिएका छन।
ओली आफू सत्ता रहँदा पटक- पाटक प्रतिनिधि सभा विघटन र सत्ता बाहिर रहँदा पनि संसदलाई अवरोध गरिरहेका कारण ओलीलाई संसदबाट निष्काशन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
एक टेलिभिजनसँगको अन्तरर्वार्तामा केपी ओलीले ठूलो घात गरेको बताउँदै उनले भने, ‘उहाँले जनताले बनाएको संविधानलाई नै तुहाउने ढंगले दुई पटकसम्म संसद विघटन मात्र नभइ व्यवस्था नै भंग गर्ने काम गर्नुभएको थियो ।
त्यस कार्यलाई अहिले हामीले रोकेका छौं । अब आउने चुनावमा जनताले यसको निर्णय गर्छन् ।’
यस्तै उनले अब नयाँ ढंगले काम गरी नयाँ विकल्पहरु लिएर आगाडि जाने बताए ।
केपी ओलीले आफूले भनेको जस्तो नभए र नगरे आफ्नो हर्कत देखाउने गरेको भट्टराईको आरोप छ । उनले आफूले भनेको जस्तो भएन भनेर संसंद विघटन गर्न मिल्छ भन्दै प्रश्न समेत गरे ।
उनले भने, ‘केपी ओली बहुदलीय लोकतन्त्र, बहुदलीय जनवाद भन्ने छ जुन उहाँको आफूले भने जस्तो भएन भन्ने वित्तिकै संसदै चल्न नदिने हर्कत गर्न मिल्छ ?’
उनले विघटन गरेर स्थापना हुँदासम्म पनि संसद अवरोध गरिरहको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । यसै क्रममा उनले भने, ‘केपी ओलीले यसरी दुई/दुई पटक संसद विघटन गर्ने अनि अपराध ढाकछोप गर्नलाई संसद चल्न नदिने दुश्कर्म गरिरहेका छन् तीनको झुक्ने हो भनेत बहुदीय कसरी टिक्छ ? भोलि आउने विपक्षले सरकार चल्न दिदैन कि त यस्ता (केपी ओली) उनलाई हटाउनु पर्‍यो ।
अब होइन भने उनलाई कारवाही गरेर संसद सुचारु गरेर जानु पर्‍यो ।’ उनले कतिपय आवश्यक विधेयकहरु रहेको हुँदा गठबन्धनका नेताहरुलाई नडराइ अगाढि बढ्न आग्रह गरेका छन् । उनले भने, ‘गठबन्धन सरकार कतिपय साथाीहले खुट्टा कमाइराख्नु भएको छ ।
खुट्टा नकमाउनुस्, प्रायोजन महिलालगायतका कतिपय विधेयकहरु त आवश्यक छन् नि संसदले पास गर्न नदिएपछि वाध्यात्मक रुपले यसरी निर्णय गरिएको हो ।
त्यसैले यो अप्रिय कुरा हो । तर यसको मूख्य दोषी केपी शर्मा ओली हो ।’ यसैक्रममा उनले केपी ओलीले फेरी पनि यस्तै दुश्कर्म गरे संसदबाट निष्काशन गर्ने धम्की दिए ।
उनले भने, ‘उनले (केपी ओली) फेरी पनि यस्तै दुश्कार्य गरिराख्छन् भने संसदबाट निष्काशन गर्न सक्छ संसदले । ओलीलाई निष्काशन गरेर संसदलाई अगाडि बढाउँनु पर्छ ।
नत्र यो नगरी बस्यो भने भोलि आउने प्रतिपक्ष जो कोही होला त्यसले संसद चल्न दिएन भने विघटन नै गर्दिने ? अथवा अध्यादेशले राज गर्ने ? यो त ठूलो लोकतन्त्र विरोधको दुश्कर्म उनले गरिराखेका छन् यसमा हामी झुक्ने गल्ती हामीले गर्नुहुँदैन ।’
Last Updated on: December 7th, 2021 at 9:36 am